Aza Mamoy Fo | EGW Writings
Aza Miantehitra amin’ny Fihetseham-poFibanjinana an’i KristyManova ny Fahazaran’ny FisainanaAtaovy Raharaha ny FivavahanaFanandramana Miandalana ny FahamasinanaToeran’ny Hery Miafina
Aza mamoy fo satria toa mafy fo ianao. Fa mampitombo ny filanao an’i Kristy ny sakana tsirairay, ny fahavalo anaty tsirairay. Tonga hanaisotra ny fo vato Izy, ary hanome anao fo nofo. Mijere Azy handraisana fahasoavana manokana handresena ireo fahotanao manokana. Rehefa manafika ny fakam-panahy, dia tohero amin-kery ny torohevitry ny ratsy; ilazao ny fanahinao: «Ahoana no hanalako baraka ny Mpanavotra? Efa nanolo-tena ho an’i Kristy aho, tsy afaka hanao ny asan’i Satana aho.» Miantsoa vonjy amin’ny Mpamonjy malala, hamoizanao ny sampy rehetra, ary hamelana ny ota ankafizina rehetra. Aoka ny mason’ny finoana hahita an’i Jesôsy mitsangana manoloana ny seza fiandrianan’ny Ray maneho ny tanany noratraina sy mifona ho anao. Minoa fa hahazo hery avy amin’ny alalan’ny Mpamonjy sarobidy ianao.HAT 89.2